Daraasadda Suurto galka in dabool la saaro waddada I-5- Somali- I-5 Lid Feasibility Study Survey
Daraasadda Suurto galka in dabool la saaro waddada I-5- Somali- I-5 Lid Feasibility Study
Ogeysiin Gaar ah:
Macluumaadka lagu bixiyay xog ururintan waxaa loo tixgelinayaa sida warbixin guud, waxaana laga yaabaa iney ahaato keyd dadweyne iyo in daaha looga qaado bulshada oo dhan. Macluumaad dheeri ah, ka eeg Sharciga Diiwaan Gelinta Dadweynaha, RCW Cutubka 42.56. Si aad wax dheeraad ah uga ogaato sida aan u maamulno macluumaadkaaga, eeg Bayaankeena Qarsoodiga ku saabsan.
Magaalada waxa ay imika sameyneysa Daraasad Xogeed si ay u go'aamiso bal suurto galnimada in dabool laga dhiso dusha I-5 laga soo bilaabo Denny Way illaa Madison Street iyo Bartamaha Magaalada. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Daraasadda iyo waxa daboolku yahay, fadlan eeg barta internetka I-5 Lid Feasibility Study.
Ra’yi dhiibashada bulshada waxey caawini doontaa inaan u warbixinno falanqeynta. Dhammaan su'aalaha ku jira sahmintan waa ikhtiyaari iyo qarsoodi.
Haddii aad wax su'aal ah qabto, fadlan la xiriir Danielle qeybta Seattle Department of Neighborhoods, Danielle.Friedman@seattle.gov, 206-256-5973.
* 1. Sidee baad ku maqashay arrinta daraasaddan?
Soo jeedin warbixin uu soo jeedinayey wakiil ka tiran Magaalada.
Ka maqlay hey’ad
Hadal ayan ku maqlay
Wax kale (fadlan sheeg)
* 2. Haddii "dhulkan" cusub la dhiso, maxaa fursado ama isticmaal kale ah oo aad dooneysaa inaad aragto?
* 3. Sidee bay Magaalada u xaqiijin kartaa in dhulkan yahay mid soo dhaweynaya adiga iyo bulshadaada?
* 4. Ma jiraan wax dareen ah oo aad ka qabto mashruucan suurto galka ah?
* 5. Miyaad ku nooshahay ama ka shaqeysaa Seattle?
* 6. Miyey jiraan wax kale oo aad jeclaan lahayd in aad nala wadaagto?
Waad ku mahadsan tahay wakhtiga aad ku bixisay dhiibashada fakarkaaga la xiriira daraasadda fog ee daboolka I-5. Wixii ku saabsan xogo dambe oo soo kordha, fadlan booqo websaydka Daraasadda Fog ee daboolka 'Lid I-5. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan la xiriir Danielle Danielle.Friedman@seattle.gov.